eNasha.com - हिट्स अवार्डको रन्को
हिट्स अवार्डको रन्को
आउँदो शुक्रबार बेलुकी ३ बजेदेखि हिट्स अवार्डको एघारौँ संस्करण शुरु हुँदैछ । आज राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा यस पटकको अवार्ड अझ बढी रोचक र दर्शनीय हुने बताइयो ।
नेपाली सङ्गीत उद्योगलाई होस्टेमा हैँसे गर्दै आइरहेको हिट्स अवार्डले यस पटक सर्वोत्कृष्ट सङ्गीत संयोजकको अवार्ड विधा थपेको छ । यसबाट पछाडि परेका श्रष्टालाई थोरै भए पनि चिनाउन मद्दत मिल्ने आयोजकहरुको विश्वास छ ।
यस पटकको अवार्डमा सबैभन्दा बढी विधामा राजेशपायल र्राईका गीतहरु परेका छन् । उनका विभिन्न गीतहरु १० विविध विधाका लागि छनोटमा परेका छन् । त्यस्तै उदेश श्रेष्ठले गायनमा सबैभन्दा बढी ५ विधामा नामाङ्कित हुने अवसर पाएका छन् ।
यस पटकको माहौल साङ्गीतिक बनाउन आयोजकहरुले कुनै कसर छाडेका छैनन् । दीपेशकिशोर भट्टर्राईले हिट्स अवार्डको इतिहासमा पहिलो पटक मञ्चमा गाउने छन् भने कुन्ती मोक्तान, राजेशपायल राई, रामकृष्ण ढकाल, उदेश श्रेष्ठले पनि अवार्डलाई सङ्गीतमय बनाउने छन् । १९७४ एडी ब्याण्डले यस पटक दुइ वर्षको मौनतापछि हिट्स अवार्डको मञ्च तताउने निधो गरेका छन् भने एक्कै छिन भए पनि अवार्ड समारोहमा स्प्रिङउडको फेशन परेड हुनेसमेत जनाइएको छ ।
अब हेर्नुछ, अवार्ड दाबी गरिएजस्तै हुन्छ वा त्योभन्दा बढी नै !
अवार्ड सङ्गीतकार रिलिज लुकेका कुरा समुद्रपार ट्रयाक बाहिर तातोपीरो नेपाली तारा कीर्तिमान क्या बात ! विचार भिडन्त गायिका उपलब्धि पेज थ्री गायक प्रेम र विवाह कन्सर्ट गीतकार हल्ला